Tweaks: Kuenda kune Yakakura Fomati | Martech Zone
Tweaks: Kuenda kune Rakawandisa Fomati
Muvhuro, September 4, 2006 Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Douglas Karr
Ndanga ndichishanda vhiki ino pane akati wandei masaiti eshamwari yangu kumusoro kuVancouver. Mukudaro, ini ndanyatso tarisa kune mamwe manhamba uye ndaona mashoma mashoma masiti ekugadzira pawebhu. Ndakafunga kuwedzera chimiro changu kuti zvive nyore kuverenga. Ndiri kuzoisa ongororo pane izvi - ndiudze kana uchizvida kana kuvenga. Ini handidi kukwesha vashanyi vangu vari kumhanya 800 x 600 kana pazasi, asi ndizvo chete 3% yevashanyi vangu. Nekuda kweizvozvo, ini handifunge kuti iboka repakati revaverengi vangu.
Sezvo ini ndinoramba ndichishanda pane mamwe masayiti evatengi, ini ndiri kuenda kunoshanda neaya matsva upamhi zvichienderana nevateereri vavo. Ndinovimba unoifarira!
Usaregeredze Kuteerera, Kuenderana, uye Kwakanaka Zvirongwa
Google Adsense yekutsvaga: Embed Mhedzisiro muWordPress
Handina kuona chimiro chako chekare, asi ndinonyatsoda iyi ine dingindira reAnaconda. Iyo font iri nyore pameso zvakare….ndiyo iyo default anaconda font?
Jun 26, 2008 na4:06 AM
Saka, 'kupamhama' kwakadii? Ini ndinoburitsa mafoto akawanda pablog rangu uye 480px yakafara ikozvino inotaridzika diki!